Ny fihinana mananasy dia mampihena ny lanjany haingana ary azo antoka! | Nutri Diet
Mananasy dia voankazo misy fananana marobe tokoa mahasoa ny vatana. Loharano tena tsara izy io Mahasalama ary malaza amin'ny maha-izy azy diuretic lehibe Manampy amin'ny fanesorana poizina sy loto ao amin'ny vatana izany.
Ny sakafo mananasy dia tonga lafatra sy mety manala ny vatana sy esory ny tsiranoka be loatra izay mazàna miteraka fiakaran-danja. Na izany aza, ny tsy fisian'ny otrikaina tena ilaina mahatonga an'ity sakafo ity hanaraka ambony indrindra mandritra ny 4 andro, satria raha tsy izany dia mety hamokatra izy io fahasimbana lehibe eo amin'ny fahasalamana an'ny olona manapa-kevitra ny hanohy azy. Avy eo hiresaka aminao amin'ny antsipiriany aho an'io sakafo malaza io mba ho hitanao hoe inona izy ireo ny tombony sy ny loza mety hitranga.
1 Tombony azo avy amin'ny sakafo mananasy
2 Inona no tolo-kevitry ny sakafo mananasy
3 Ny sakafo mananasy
3.1 Andro voalohany
3.2 Andro faharoa
3.3 Andro fahatelo
4 Maharatsy ny sakafo mananasy
Tombony azo avy amin'ny sakafo mananasy
La sakafo mananasy Izy io dia manana andian-tombo izay ilaina ho fantatrao ary afaka manampy very lanja ary hamafana ireo kilao fanampiny manelingelina anao ireo:
Izany dia fomba mampihena miaraka amin'ny valiny eo noho eo, satria ny fihinanana mananasy dia manampy mampihena ny fivontosana ao amin'ny kibo efa esory ny tavy miangona ao amin'ny vatana.
Mananasy dia diuretic tena tsara ka tonga lafatra ho an'ny Diovy tsara ny zavamiaina manontolo. Manampy anao amin'ny famafana ny fihinanana azy poizina sy loto rehetra izany dia ao anatin'ny vatanao.
Voankazo misy vitamina betsaka ary izy io dia mety amin'ny fanadiovana taova toa ny aty na ny voa.
Ny mananasy dia mamela anao hamelabelatra lovia tena samy hafa ary tena matsiro amin'ny inona izany sakafo tena manintona manary lanja.
Inona no tolo-kevitry ny sakafo mananasy
Ny sakafo mananasy tsy manolotra zavatra hafa ankoatry ny mihinana mananasy mandritra ny sakafo atoandro dia manampy ny fihinanana karazana sakafo kaloria ambany hafa ary miaraka amin'ny tavy kely ho an'ny manavesatra amin'ny fomba haingana sy mahomby. Ity karazan-tsakafo ity dia mamela ilay olona diovy tsara ny vatanao manontolo, manala daholo loto sy fako izay miforona isaky ny avy misakafo.
Araka io sakafo io ihany sakafo eo amin'ny 3 isan'andro ary ao amin'izy ireo ankoatry ny mananasy voajanahary, azonao atao ny mampiditra farafaharatsiny proteinina karazana mahia 400 grama eo ho eo toy ny amin'ny akoho, vorontsiloza, trondro na bitro. Araka ny hitanao, ity karazan-tsakafo ity dia misy tsy fahampiana ara-tsakafo betsaka ka avela hanaraka io sakafo io ihany mandritra ny 4 andro farany ambony. Raha toa ka manitatra io fomba fihenan'ny lanja io mandritra ny andro maromaro, dia mety hijaly ilay olona resahina olana ara-pahasalamana lehibe satria tsy manome ny vatanao ny otrikaina ilaina hiasa tsara.
Ny sakafo mananasy
Dia hasehoko anao manaraka ohatra iray amin'ny menio amin'ity karazana sakafo ity izay misy manodidina ny 3 andro.
Mandritra ny sakafo maraina dia afaka misakafo ianao roa silaka mananasy voajanahary miaraka amin'ny toast mofo feno miaraka amina Jam kely.
Ho an'ny sakafo antoandro dia azonao atao ny mihinana anana roa mananasy voajanahary miaraka aminy steak hen'omby miaraka amina broccoli kely voahidy vinaingitra sy menaka.
Amin'ny sakafo hariva dia afaka misakafo ianao fonon-tratra roa nendasina miaraka amin'ny salady salady sy voamadinika roa.
Amin'ny sakafo maraina dia afaka mahazo ianao mofomamy roa, yaourt skimmed ary paiso roa.
Ho an'ny sakafo atoandro 200 grama salmon voaendy eo akaikin'ny silaka mananasy roa.
Amin'ny sakafo hariva dia afaka misakafo ianao salady salady sy voanjo ary silaka mananasy roa.
Ho an'ny sakafo maraina dia azonao atao ny manana cookies roa voa, kafe ary silaka mananasy voajanahary roa.
Ho an'ny sakafo 200 grama tratra nono miaraka amin'ny legioma nandrahoina sy silaka mananasy roa.
Amin'ny sakafo hariva dia afaka manamboatra crème legioma misy seleria, artichoke na asparagus ary manan-kesika roa.
Raha manaraka an'ity drafitra ity ianao mandritra ny telo andro dia hahazo izany diovy tsara ny vatanao manontolo, hisoroka ny fihazonana tsiranoka ianao ary hanao izany very ireo kilao fanampiny hatraiza ny fanelingelenany anao. Zava-dehibe ny hahatsiarovanao izany sakafo fanadiovana io ary noho izany dia tsy tokony haharitra telo andro mahery.
Maharatsy ny sakafo mananasy
Zava-dehibe ny mahatadidy fa ny sakafon'ny mananasy tsy fahampiana ara-tsakafo maro, noho izany tsy tsara ny fanarahana azy mandritra ny 4 andro mahery. Sakafo manampy izany manala poizina vatana ary mampihena ny lanjany haingana fa izay tsy tokony halavaina ara-potoana.
Sakafo ara-tsakafo io kaloria tena ambany dia ambany ka mila mitandrina tsara ianao raha resaka fanarahana azy satria tsy manome otrikaina ilaina izany.
Izy io dia heverina ho sakafo fahagagana amin'ny zavatra ananany fiantraikany lehibe iray ka raha tsy manova ny fahazarana ianao dia azo antoka fa mahazo lanja ary makà kilao maro amin'ireo very.
Tsy sakafo tokony atoro azy io ary tsy tsara ho an'izay manana olana amin'ny voa.
Alohan'ny hamaranana dia tsy maintsy tadidinao izany miasa ny sakafo mananasy ary afaka mahazo ny valiny andrasana ianao, rehefa vita izany hoy ny drafitry ny fihenan-danja, tsy maintsy manomboka karazana sakafo mahasalama sy voalanjalanja ampiarahana amin'ny fanatanjahan-tena kely isan'andro. Amin'izany no hialanao ny vokan'ny fiakarana mahatsiravina ary ho afaka hihazona ny lanja ianao. Ireo mpanohana ny sakafo toy izany dia manambara fa mety ho very izy io lanja eo amin'ny 2 kilao ao anatin'ny telo andro monja, izany no antony maha-zava-dehibe ny hevitrao ho an'ny mpahay sakafo na manam-pahaizana manokana alohan'ny hanombohana ity sakafo ity ary hialana olana ara-pahasalamana lehibe. Ny manam-pahaizana dia hanao fanadihadiana ary hilaza aminao raha manimba na tsia manomboka an'ity karazana ity fomba mampihena.
Avy eo avelako ianao video hanampy anao hahafantatra bebe kokoa momba ny sakafo mananasy malaza ary inona ny tombotsoany ary daholo ny fanoherana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo mananasy